မညှာနဲ့ဆောင့်နော် – My Blog
မေဧကရီ မှာ ယောင်္ကျား ရှိပေမဲ. သူ.ယောင်္ကျား ကိုဇော်ထွန်း က နယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေတာမို. ၂ လတခါ လောက်သာ တွေ.ရပြီး သူ ကတော. ရန်ကုန် မှာပင် စတိုးဆိုင်ဖွင်.ကာဆိုင်မှာပင် အသက် ၁၅နှစ်ခန်. အိမ် ဖေါ်မလေး သက်စု နှင်. နေတာဖြစ်သည်၊ သူ. စတိုးဆိုင်တွင်အောင်အောင် ဆိုသည်. ၁၈ နှစ်အရွယ် အရောင်းကောင်လေး တယောက်နှင်. ရွယ်တူ အရောင်းစာရေးမလေး ကေကေ နှင်. အိမွန် တို. အလုပ် လုပ်ကြပြီး ည ၁၀ နာရီခန်.အထိဖွင်.ကာ ဝန်ထမ်းများကို ဆိုင်ပိတ်ပြီးလျှင် ကားဖြင်. သူကိုယ်တိုင် လိုက်ပို. ပေးတာမို. အဆင်ပြေလှသည်။ တနေ. နေ.လည်ဖက် လူရှင်းတုန်း မေဧကရီ လည်း ခုံပုလေးဖြင်. စင်အပေါ်ဆုံးမှ မုန်.ပုံးကို လှမ်းယူနေတုန်း သူ.အနောက်နားရောက်နေသည်. အောင်အောင် မှာ မေဧကရီ မို.မောက်သောရင်အစုံ သေးသွယ်သောခါးလေး နှင်. လိုက်ဖက်လှသော ကားစွင်.လုံးဝိုင်းပြီး ကောက်နေသည်.ဖင်ကြီးအား သိမ်းကြုံးကြည်.ကာ။
လီးပင် တောင်လာကာ စိတ်ထဲမှ ပြစ်မှားနေတုန်း မေဧကရီ ခုံပေါ်မှ ခြေချော်ကျကာ အောင်အောင် ကလည်း အနားရှိနေတာမို. ဖမ်းထိမ်းလိုက်ရာ မေဧကရီ မှာအောင်အောင် ကိုယ်ပေါ်ကျောမှီ ကျကာ အောင်အောင် လည်း ရုတ်တရက်လှမ်းပွေ.လိုက်ရာလက်တဖက်က မေဧကရီ၏ ကားစွင်.သည်. ဖင်ကြားထဲ နှိုက်မိသလိုဖြစ်သွားပြီး နောက်တဖက်ကခါးသိမ်လေး ကိုဖက်မိသွားတာမို. လူပျိုရိုင်းလေး အောင်အောင်မှာ သွေးဆူကာ လီးကြီး ထောင်မတ်လာပြီး မေဧကရီ၏ ဖင်သား အိအိကြီး ကို သွားထောက် မိသွားပါသည်။ မေဧကရီ လည်း အောင်အောင် လက်က သူ.ဖင်ကြားထဲ နှိုက်သလိုဖြစ်ကာ လီးကြီးကလည်း သူ.တင်ပါးအိအိကြီး ကိုထောက်မိကာ ပူနွေး သည်. အထိတွေ.ကြောင်. ရင်တုန်ကာရုတ်တရက် မခွာမိဘဲ သာယာသွားသည်၊ ခဏကြာမှ သတိရကာ “ ဟဲ. နင် ကလည်း လွှတ်တော.လေ ဟွင်း ” ဟုပြောရင်း ကြာမျက်စောင်းထိုးခါ ပတ်ဝင်းကျင်ကိုလည်း အကဲခတ်လိုက်ပြီး။
ဘယ်သူမှ မတွေ.မှန်းသိတော.မှ အောင်အောင် ၏ ယောင်္ကျားပီသ သည်. မျက်နှာနုနုလေး ကိုပြန်ကြည်.ရင်း ပြီတီတီ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ဖင်ကြီး တလုံးချင်းခါရမ်းကာ ထွက်သွားပါတော.သည်။ အောင်အောင် မှာတော. မေဧကရီ၏ နှုးညံ.သည်. ကိုယ်လုံးအိအိ အတွေ.ထိကြောင်.သွေးသား ဆူပွက်ကာ အူရိုင်းလေးမို. လီးကြီးမှာ ပုဆိုးကြားမှထောင်မတ်နေပါတော.သည်၊ကေကေနှင်. အိမွန် တို.ကတော. ဆိုင်ရှေ.တွင် ထိုင်ကာ ကိုရီးယားမင်းသား အကြောင်းပြောနေကြတာမို.ဘာမှ မသိလိုက်ပေ၊ မေဧကရီ မှာ ဆိုင်အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီး ရင်ခုန်နေကာအောင်အောင်. လီးကြီး ဖင်ကိုလာ ထောက်တာ ပြန်တွေးမိပြီး စောက်ပတ် ပင် စိုစိစိ ဖြစ်လာပါတော.သည်၊ သူ.မှာ ယောင်္ကျား ကလည်း အနားမရှိတာမို. ကောင်းကောင်းအလိုးမခံရဘဲ အသက်၂၇ နှစ် အရွယ် သွေးသား ထကြွတုန်း မို. မချင်. မရဲဖြစ်ကာ အောင်အောင် အလိုးခံရရင် ကောင်းမှာဘဲဟု တွေးနေမိတော.သည်။
သည်လိုနှင်. နောက် တရက် ဆိုင်ထဲရှိ ခုံပုတလုံးတွင်အောင်အောင်ထိုင်ကာ စာအုပ်တအုပ် ဖတ်နေတုန်း မေဧကရီ က ကောင်တာခုံမှ လှမ်းကြည်.လိုက်ရာအောက်စလွတ်ကာ အောင်အောင်၏ ၇ လက်မကျော်သည်. လီးမဲမဲကြီး ကို အထင်းသား မြင်လိုက်ရတာမို.ရင်ခုန်ကာ တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်နေပြီး သူ.ယောင်္ကျား ကိုဇော်ထွန်း၏ လီးမှာ ၆ လက်မသာ ရှိတာမို. အခုတွေ.နေရသည်. အောင်အောင်၏ ၇ လက်မကျော်သည်. လီးကြီးကို သူ.စောက်ပတ်ထဲထည်.ကြည်.ချင်စိတ်များ စိတ်ထဲထကြွနေပါတော.သည်၊ မေဧကရီ လည်းအောင်အောင် ၏ လီးကြီး ကိုတွေ.ပြီးထဲက အောင်အောင် ကို ကုန်းချင်စိတ် အလိုးခံချင်စိတ်များ တဖွားဖွား ဖြစ်နေကာ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းရှာ ရမလဲ စဉ်းစားရင်း တနေ.လုံး အောင်အောင်. လီးကြီး ကိုသာ မြင်ယောင်နေပါ တော.သည်၊ သည်လိုနဲ. နောက်နှစ်ရက်ခန်.ကြာသော အခါ ည ၇ နာရီခန်. တွင် မီးရုတ်တရက်ပျက် သွားသဖြင်. မေဧကရီ လည်း အမှောင်ထဲ မှာ။
ဟဲ. အောင်အောင် မီးချစ်ယူခဲ. ဖယောင်းတိုင် ငါ.ဆီမှာရှိတယ် ” ဆိုသဖြင်. အောင်အောင် လည်း မဆိုင်းမတွပင် “ ဟုတ်ကဲ. လာပြီ မမမေ ” ဟုပြောရင်း အမှောင်ထဲ မေဧကရီ ရှိရာ စမ်းပြီးသွားရာ အောင်အောင် လက်မှာ မေဧကရီ၏ ကားစွင်.နေသည်. ဖင်ကြီးကို ကိုင်မိသွားကာ အောင်အောင် လည်း ဖင်သားအိအိကြီး ကိုကိုင်ကောင်းကောင်း နှင်. မီးမညှိသေးဘဲ ဆက်ကိုင်ထားမိရာ မေဧကရီ လည်း အရသာတွေ. နေတာမို. အသာငြိမ်နေမိပြီး ဖင်ကြီးကို ကောက်ကာ အနောက်သို.ကော.ပေးနေမိပြီး ခဏကြာမှ “ ဟဲ. နင် ကလည်း မီးညှိလေ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး ဟွင်း ” ဟု ညုတုတု ပြောလိုက်ကာ လူချင်းခွာ လိုက်ပါသည်၊ သည်တော.မှ အောင်အောင် လည်းသတိရကာ မီးညှိပေးလိုက်သည်၊ မေဧကရီ ကတော. ရှက်ရှက် နှင်. ခေါင်းငုံထားရင်း အောင်အောင် လီးကြီး တောင်ကာ ပုဆိုးထောင်နေတာ တွေ.ကာ တလှပ်လှပ် နှင်. အလိုးခံချင်စိတ်များ ကာမပိုးများ ထကြွနေပါတော.သည်။
ထို.နောက် ည ဆိုင်ပိတ်ပြီး ကားဖြင်. ကေကေ နှင်. အိမွန် တို.အား လိုက်ပို.ပြီးနောက် မေဧကရီ လည်း အကြံရကာ အောင်အောင် အား “ အောင်အောင် ဒီနေ.ဆိုင်မှာဘဲ လိုက်အိပ် ပါလား မမ စာရင်း တွေ လုပ်စရာလည်းရှိတယ် ကူလုပ်ပေးပေါ. ” ဟု ပြောလိုက်ရာ အောင်အောင် လည်း မငြင်း တော.ဘဲ “ ဟုတ်ကဲ. ရပါတယ် မမမေ ” ဟုပြန်ပြောလိုက်တာမို. မေဧကရီ လည်း ကားကို ဆိုင် သို. ပြန်မောင်းလာခဲ.သည်၊ ဆိုင်ပြန်ရောက်တော. အောင်အောင် အား အောက်ထပ် စတိုခန်းမှာ ခဏထားခ.ဲ ပြီး အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းသို.ပြန်လာပြီး အဝတ်စားလဲလိုက်ပါသည်၊ အပေါ်က ကြိုးတချောင်း င်္အကျီ အဖြူပါးပါးလေး ကို ဘရာစီယာ မခံဘဲ အောက်က ဒူးခေါင်း ဖုံးရုံ စကဒ်အကား ကို ပင်တီ မပါ ဘဲ ဝတ်ကာ အိမ်ဖေါ်မလေးသက်စုကို အိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး အောက်ထပ် အောင်အောင် ရှိရာစတိုခန်း သို. ဆင်းလာခဲ.ပါသည်၊ အောင်အောင် က စားပွဲတလုံးပေါ်တွင် ဒူးတဖက်ထောင်ကာထိုင်နေတာ မို့။
အောက်စလွတ်ကာ လီးကြီးကို မေဧကရီ တွေ.လိုက်ရကာ ကာမသွေးများ ဆူပွက်လာပါတော. သည်၊ နောက်တော. စာရင်းများ အတူစစ်နေကြရင်း ည ၁၁ နာရီ ကျော်ခန်.တွင် မေဧကရီလည်း ခုံပုတလုံးပေါ်တက်ကာ စင်ပေါ်မှ တစ်ရှုးဘူးများ လှမ်းယူရင်း အောင်အောင် ကလည်း မေဧကရီ ၏ အနောက်နားမှ မေဧကရီ၏ ကားစွင်.လုံးဝိုင်း သည်. ဖင်ကြီး သေးသွယ်သောခါးလေး နှင်. မို.မောက်နေသည်. နို.အစုံတို.ကို ကြည်.နေမိရာ ကြိုးတချောင်းင်္အကျီ ကလည်းပါးလွန်းပြီး ဘရာ စီယာ မဝတ် ထားတာမို. နို.သီးခေါင်းလေး ဖုနေတာပင် မြင်နေရကာ စကဒ် ကလည်းပါးလွှာပြီး ပင်တီ မပါတာမို. ဖင်ကြီးမှာ လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း တုန်ခါနေတာမို. နောက်ပြီး မေဧကရီ လက် မြှောက်လိုက်တိုင်း င်္အကျီခါးတိုတာမို. ဗိုက်သားဖွေးဖွေးရှပ်ရှပ်လေး ကိုမြင်တွေ.နေရကာ အောင်အောင် မှာ မချင်.မရဲနှင်. ဘာမှလည်း မလုပ်ရဲဘဲ လီးကြီး ကတော.ထောင်မတ်နေပါတော. သည်။
ထိုအချိန်တွင် မီးရုတ်တရက် ပျက်သွားသဖြင်. မေဧကရီ လည်း အခွင်.ကောင်းမို.“ ဟဲ. အောင်ရေ လုပ်ပါအုံး မမ ကြောက်တယ်ကွာ ဟင်. ” ဟု မူပိုရင်း ခုံပုပေါ်မှ အဆင်း အောင်အောင် ကလည်း ရှေ.အတိုးမို. အောင်အောင်. ရင်ခွင်ထဲ မေဧကရီ ကျောပေးလျှက် တကိုယ်လုံး ရောက် စာ ရောက် သွားပြီး အောင်အောင်၏ ထောင်ထနေသည်. လီးကြီး မှာ မေဧကရီ၏ ဖင်အိအိကြီး ကိုထောက်မိ သွားကာ အောင်အောင် ကလည်း ယောင်ပြီး မေဧကရီ ကိုဖက်ထားလိုက်ရာ မေဧကရီ အဖို. သူ.ဖင်ကြီး ကို ပူနွေးနွေး လီးကြီး အထိတွေ.ကို သာယာနေကာ “ အောင်ရယ် မမ ကြောက်လိုက် တာ ဖက်ထားနော် မလွှတ်လိုက်နဲ. ဟင်. ” ဟုပြောရင်း ခါးကော.ကာ ဖင်ကြီးကို နောက်ပစ်ပြီး အောင်အောင်၏ လီးကြီး ကို ပွတ်နဲ.ပေးနေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် လည်း မရဲတရဲနှင်. မေဧကရီကိုဖက်ထားရင်းမှလီးကြီး ကလည်း ဖင် အိအိကြီး အထိတွေ.ကြောင်. မာန်ဖီနေတာမို. ပိုဖိကာထောက်ထားလိုက်ပြီး မေဧကရီ၏ ပါးကိုငုံ. နမ်း လိုက်ပါတော.သည်။
မေဧကရီ လည်း ကာမပိုးများဆူပွက်နေကာ “ ဟင်. ဟင်. အောင်ရယ် အာ. မမ ကို ချစ်လားဟင် ” ဟု ညုရင်း အောင်အောင် ကို လက်နောက်ပြန် သိုင်းဖက်လိုက်ကာ ဖင်ကြီးကို ပစ်ကော.ပေးနေပါတော.သည်၊ အူရိုင်းလေး အောင်အောင် အဖို.တော.ရင်ခုန်စရာဘဲမို. ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘဲ မေဧကရီ၏ ပါး ကိုနမ်းနေရင်း လက်နှစ်ဖက်က မေဧကရီ၏ နို.အစုံကို င်္အကျီပေါ်မှ လှမ်းကိုင်ကာ နယ်နေလိုက်သည်၊ မေဧကရီ လည်း အောင်အောင်၏ အကိုင်တွယ် တွင် လွင်.မျှောနေပြီးနောက် ကိုယ်ကိုလှည်. လိုက်ကာ အောင်အောင် လည်ကုတ်ကို သိုင်းဖက် လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်း စုပ်နမ်းလိုက်တာမို. အောင်အောင် လည်း ပြန်နမ်းစုပ်နေရင်းလက်နှစ်ဖက် က ဖင်အိအိကြီးကို နယ်နေလိုက်သည်၊ မေဧကရီ လည်း ကာမပိုးများ အလိုအတိုင်းဏှာထန်နေပြီ မို. အောင်အောင်၏ င်္အကျီကို ချွတ်ရင်း ပြီတီတီမျက်နှာပေးဖြင်. “ ဟငွ .် အောင်မမ က ို ချစ်လား လို. မေးတာလဲ မဖြေဘူး လူဆိုးလေး ” ဟု ညုကာပြောရင်း။
ကော.ပြီး သူ. စောက်ပတ် နှင်. လီးကြီး ကိုပွတ် နေပါတော.သည်၊ထိုအချိန် မီးလည်းပြန်လာပြီမို. သေချာမြင်နေရပါတော.သည်၊ အောင်အောင် လည်း တဖြေးဖြေး ရဲလာကာ မေဧကရီ၏ စကဒ်ကိုလှန်ကာဖင်သားအိအိကြီး ကို နယ်ပေးရင်း “ မမ ဖင်ကြီးတွေက ကိုင်လို.ကောင်းတယ် ချစ်စရာကြီး ” ဟုပြောလိုက်ရာ မေဧကရီ က “ ဟွင်း ဘာလဲ လူကိုချစ်တာလား ဖင်ကြီးကိုချစ်တာလား အို. အောင်ရယ်အာ.ဟာ.” နှင်. ပြန်ညုရင်း အောင်အောင် က မေဧကရီ၏ ဖင်စအို၀ ကို လက်ညိုးဖြင်. ကလိလိုက်တာမို. ကာမ သုခပြည်.ဝကာ အကြောပေါင်းစုံ ထကြွလာပြီး တွန်.လိမ်နေပါတော.သည်၊ မေဧကရီ လည်း အောင်အောင် အကိုင်တွယ်တွင် လွင်.မျှောနေရင်းမှ အောင်အောင်၏ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ရာ မာန်ဖီကာထောင်မတ်နေသည်. ၇ ကျော်ခန်.ရှည်ပြီးအတော်တုတ်သည်. လီးကြီး ကိုကြည်.ရင်း ရင်တုန်နေကာ လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဂွင်းထုသလိုလုပ်ပေးနေပါတော.သည်။
အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ ဂွင်းထုပေးနေတာမို. အရသာတွေ.ကာ ဏှာထန်နေသည်. မေဧကရီ၏ မျက်နှာချောချောလေး အားငေးကြည်.ရင်း မေဧကရီ၏ ကြိုးတချောင်းင်္အကျီကို ချွတ် ပေးလိုက်ပြီး နို.မို.မို. ချွန်ချွန်ကော.ကော. အစုံအား တပ်မက်စွာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နယ်ပေးနေ ပါ သည်၊ မေဧကရီ လည်း နို.ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း အနယ်ခံရတာမို. ကာမပိုးများ ပိုထကြွလာကာ “ အာ. ဟာ. အို. အောင်ရယ် အဟင်. အရမ်းဘဲကွယ် အင်. ” နှင်. ညည်းညုရင်း သူ.စကဒ်ကိုချွတ် ချလိုက်ပြီး အောင်အောင်ရှေ. ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ လီးကြီးကိုကိုင်ပြီးသူ.နှုတ်ခမ်းထော်ထော်လေး ဖြင်. စုပ်ငုံပေးလိုက်ပြီး လျှာဖျားလေးဖြင်. ဒစ်ကိုလျှက်လိုက် သွားဖြင်. ဒစ်ကိုအသာခြစ်လိုက်လုပ် ပေးလိုက်ရာ အူရိုင်းလေး အောင်အောင် မှာ အထွတ်ထိပ်ရောက်ကာ မေဧကရီ၏ ခေါင်းကိုကိုင် ကာ ညှောင်.ပေးရင်း “ အား ဟား ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် အဆုံးထိစုပ်ပေးပါလား ” နှင်.ပြော လိုက်တော.သည်။
မေဧကရီ ကလည်း ဏှာထန်နေပြီမို. အောင်အောင် အလိုကျ လီးကြီးကို အဆုံးထိဝင် အောင် အာခေါင်ထဲထိ စုပ်ငုံပေးလိုက်ပြီး လျှာလေးကလည်း လီးတန်အောက်ပိုင်းကို လျှက်ကာ ကလိပေးနေလိုက်ပြီး တခါတခါ ဂွေးဥကိုရော ဖင်ကြား ကိုပါ လျှက်ပေးလိုက်သည်၊ မေဧကရီ မှာ သူ.ယောင်္ကျား ကိုတောင် တခါမှ လီးမစုပ်ပေးဘူးဘဲ အခုမှ အောင်အောင် ကို သူတယောက် ထဲခိုး ကြည်.ဘူး သည်. ဏှာရုပ်ရှင်ကားများထဲကလို စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပေးပြုစုပေးနေတာဖြစ် ကာ အတွေ.ကြုံသစ်မို. အရသာထူးတွေ.ကာ စောက်ပတ်တခုလုံး စောက်ရည်များရွှဲစိုနေပါ တော. သည်၊ “ ပျွပ်ပျွပ် ပွှပ်ပွှပ် ပလွတ်ဈွပ်ဈွပ် အုအု အု ” နှင်. မေဧကရီ မှာ အသံပင်ထွက်ကာမျက်တောင်မှေး စင်းကာ လီးကြီး ကိုစုပ်ငုံပေးနေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် မှာ မေဧကရီ၏နှုတ်ခမ်းထော်ထော် လေးဖြင်. သူ.လီးကြီးကို အဆုံးထိစုပ်ငုံပေးနေတာ ငုံ.ကြည်.ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်နေတာမို. ကော. ပြီး ကားစွင်.ကာ ဂီတာလေးလိုဖြစ်နေသည်။
မေဧကရီ ၏ ဖင်ကြီးကိုအရသာခံကြည်.နေပါတော. သည်၊ အောင်အောင် မှာ အိပ်မက် မက်နေသလိုပင်ဖြစ်နေကာ သူ အရင်က ဂွင်းမှန်းထုနေသည်. သူ.ဆိုင်ရှင် မေဧကရီ က သူ.လီးကြီးကို အားရပါးရစပ်ငုံပေးနေတာမို. ကျေနပ်နေကာ တက်လိုး ချင်စိတ်များ ထကြွနေပါတော.သည်၊ မေဧကရီ လည်း အောင်အောင် ၏ လီးကြီးကို အတော်ကြာ စုပ်ငုံပေးလိုက်ပြီးနောက် ဏှာထန်ကာ အလိုးခံချင်နေပြီမို. လီးစုပ်ရပ်ကာ ပြန်ထလိုက်ပြီး အောင်အောင် ကိုသိုင်းဖက်လိုက် ရင်း “ အောင်ရာ ချစ်ကြစို.ကွာ မမ မနေနိုင်တော.ဘူး ဟင်. ဟင်. ” ပြောရင်း စတိုခန်း ထောင်.ရှိ ကုတင်သေးသေးလေးဆီ သွားလိုက်ပါသည်၊ အောင်အောင် က မေဧကရီ ကိုပြန် ဖက် ထားရင်း ဖင်ကြီးကို နယ်ပေးရင်းမှ “ မမ ချစ်ကြမယ် ဆိုတာ လိုးမှာပြောတာလား ” ဟုတမင်မေး လိုက်ရာ မေဧကရီ မှာ ဒီလို ပေါ်တင်တခါမှ မကြားဘူးတာမို. ရှက်သလိုဖြစ်ကာ ကာမသွေးများ ဆူပွက် လာပြီး။
“ ဟာ အောင် ကလည်းကွာ ရှက်စရာကြီး ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး ” ဟုပြောရင်း ကုတင်ပေါ် တက်ကာ ပက်လက်လှန်ပြီး ဒူးကွေးကာ ဖြဲကားပေးလိုက်သည်၊ အောင်အောင် လည်း ဖြဲကားပေး ထားမို. မေဧကရီ၏ စောက်ရည်ရွှဲနေသည်. စောက်ပတ်လေး အား သေသေချာချာ ကြည်.ရင်း “ မမ ကလည်း ဘာရှက်နေတာလဲ အခုဘဲ မမ စောက်ပတ် ထဲ အောင်. လီးကြီးထည်. လိုးတော. မှာ” ဟု ခပ်ရင်.ရင်. ပင်ပြောလိုက်ရာ မေဧကရီ လည်း “မသိဘူး ကွာ အောင် ကလည်း လုပ်မှာ လုပ် တာမဟုတ်ဘူး ဟွင်း ” ဟုပြောရင်း ပြီတီတီ မျက်နှာဖြင်. ညု လိုက်တော.သည်၊ အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ၏ ဖင်ကြီး အားခွကာဒူးထောက်လိုက်ပြီးဒစ်ကိုကိုင်ကာ မေဧကရီ၏ စောက်ပတ်၀ တေ.ကာသွင်း လိုက်ရင်းမှ “ ကဲ မမ အောင် တက်လိုးတော.မယ်နော် ” ဟု ရီရင်း ပြောလိုက်ရာ မေဧကရီ လည်း အလိုးခံချင်နေပြီမို. “ ကဲပါ အောင်ရယ် လိုး လိုး သိ လား မမ ကို တက်လိုး ကျေနပ်ပြီလား ဟွင်း ” ဟုပြောရင်း မျက်စောင်းထိုးရင်း။
ဖင်ကြီး ကိုကော. ပေးကာ လီးကြီး ပိုဝင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်သည်၊ အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ၏ ဂျိုင်းကြား လက်ထောက်ကာ နွားသိုး ကြိုးပြတ် ဆောင်.လိုးပါတော.သည်၊ “ ဗျိဗွ ျ ွိ ဗျပွ်ဗျပွ်ဘွပ်ဘွပ်အီး အား အား အမေ. ကျွတ်ကျွတ်အင.် အင်. ဟင်. အာ. အောင်ရယ် သေပါပြီ အိ. အိ. အာ. ဟင်. ဟင်. အား မမ ကိုသနားပါအုံး အင်. ဟင်. ဟင်. အီး အာ. အာ. ” မေဧကရီ မှာ သူ.ယောင်္ကျား လီးထက် အတော်ပင်ပိုကြီးသည်. အောင်အောင်၏လီးကြီး နှင်.ခပ်ကြမ်းကြမ်းတက်လိုးခံရတာမို.အီစိမ်.နေကာ စောက်ပတ်ကွဲမတတ် စာ ခံစားနေရကာ မျက်နှာရှုံမဲ.ကာ အံ.ကြိတ် အလိုးခံရင်း ဖင်ကြီးကို မြောက်ကြွမြောက်ကြွ လုပ်ပေး နေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် ကတော. နွားသိုးကြိုးပြတ် လိုးနေရင်း မေဧကရီ၏ ရှုံမဲ.ကာ အံ.ကြိတ် အလိုးခံနေသည်. မျက်နှာချောချောလေး အား ကြည်.ရင်း “ အောင် လိုးတာ ကောင်း လား ဟင် မမ ခံလို.ကောင်းလား ” ဟုမေးလိုက်ရာ။
မေဧကရီ လည်း ကာမပိုးများ ထကြွဆူပွက် နေပြီမို. “အိ. အိ. အာ. ဟာ. အို. အောင်ရယ် အရမ်းခံလို.ကောင်းတာဘဲ ဆောင်. ဆောင်.အီးအား မညှာနဲ. ဆောင်.ပေး အားဟာ. အဟင်. မမ အောင် နဲ. ခလေးလိုချင်လိုက်တာ အင်. အင်. ဟင်. အို. အောင်ရယ် မမ ကို ဗိုက်ကြီးအောင် လိုးပေးရမယ်နော် အောင် ဟင်. အင်. အီး အား ကျွတ် ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာ အိ. အိ. အင်. ဟင်. ” အရှက်မရှိတော.ဘဲ ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်းပေးရင်း ပြန်ပြောရင်း အလိုးခံနေပါသည်၊ အောင်အောင် ကတော. မေဧကရီ အား မီးကုန်ယမ်းကုန် တက်လိုးနေရင်းမှ “ တကယ် လား အောင် လိုးလို. မမ ဗိုက်ကြီးရင် မမယောင်္ကျားကို ဘယ်လိုပြောမလဲဟင် ” ဟ ုမေးလိုက် ရာ မေဧကရီ အဖို. အောင်အောင် လီးကြီးကို ခိုက်နေကာ မွှန်နေပြီမို. “ အောင် ကလည်း သူ.ကို ဂရုစိုက် မနေပါနဲ. သူမသိပါဘူး အင်. ဟင်. ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ် အိ. အိ. အာ. ဟွင်. ဆောင်. ဟုတ်ပြီ တအားဆောင့်။
အီး အား အင်. အဟင်. အောင်လီး ကအကြီး ကြီးဘဲ အီး အာ.” နှင်. ပြန်ပြောရင်း နောက်မီး လင်းဇာတ်ခင်းနေပါတော.သည်၊ မေဧကရီ မှာ လီးငတ်နေသူမို. အခုလို ကောင်းကောင်း လိုးပေးနိုင်သည်. အောင်အောင်. ကိုစွဲသွားကာ ဖင်ကြီး ကိုမွှေ.ရမ်းရင်း အစွမ်းကုန် ပြုစုပေးနေလိုက်ပြီး “ အောင်ရေ တမျိုးပြောင်းပြီး လိုးပေးအုံးကွာ နော် မမ လေးဖက် ကုန်းပေးမယ် အောင် အနောက်ကနေလိုးပေး ” ဟုပြောလိုက်သဖြင်. အောင်အောင် လည်း သူ.လီးကြီး ကို မေဧကရီ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ချွတ်လိုက်ပြီး “ ကောင်းတယ် မမ ဖင်ကြီးကိုကြည်. ပြီး ခွေးတွေလို လိုးချင်နေတာကြာပြီ ” ဟုပြောလိုက်ရာ မေဧကရီ လည်း ခွေးမလေးလို လေးဖက် ကုန်းကာ လက်နှစ်ဖက်က ဆန်.ထောက်ပေးရင်း “ ဟွင်း အောင်ရာ မမ ဖင်ကြီးကိုမကြည်.နဲ.ကွာ ရှက်တယ် ”ဟု ခြင်ထောင်သံဖြင်. ညုပေးလိုက်သည်၊ အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ၏ ဖင်ကြီးကို ခွကာ ဒစ်ကိုကိုင်ပြီးစောက်ပတ်ဝတေ.ကာ ထည်.လိုက်ရင်း။
“ မမ ဖင်ကြီး ကို အောင် အရင်ထဲက ကြည်.ပြီးလိုးချင်နေတာ ရှက်မနေပါနဲ. ” ဟုပြောပြီး မေဧကရီ၏ ခါးသေးသေးလေး ကိုင်ကာ ဆောင်.လိုးပါတော.သည်၊ “ ဇွိ ဗျွိဗျွိ ဘွပ်ပျွပ် ဈွပ် ဈွပ် ဗျွပ်ဗျွပ် အီး အား အမေ. အာ.ဟာ. အို အောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး အာ.အာ. အင်. အဟင်. ဟင်. ဆောင်. ဆောင်. အီး အား မမ ဖင်ကြီးကြည်.ပြီး ဆောင်. ဟွင်း လူဆိုးလေး အင်. အင်. ဟင်. ဟာ. အို. ” နှင်. မေဧကရီ မှာ အထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြီမို. ဖင်ကြီး ကို အနောက်သို. အစွမ်းကုန် ပစ်ကော.ပေးရင်း အလိုးခံနေပါတော.သည်၊ မေဧကရီ ၏ ကားစွင်.ပြီး လုံးဝိုင်းနေသည်. ဖင်ကြီးမှာ အောင်အောင် ဆောင်.လိုး လိုက်တိုင်း တုန်ကာခါရမ်းနေတာမို. အောင်အောင်. အဖို. ရမက်ဆေးကြီး သဖွယ်ဖြစ်ကာ မမော နိုင်ဘဲ လီးကြီး ဝင်သွားတိုင်း မေဧကရီ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ စုဝင်သွားပြီး လီးကြီးပြန် အထုတ်တွင် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ လှန်ထွက်လာတာ ကြည်.ကောင်း ကောင်း နှင်။
မနား တမ်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင်.လိုးရင်း “ ဟား မမ ဖင်ကြီး ကအိနေတာဘဲ စောက်ပတ်ကြီး က လည်း လိုးလို.ကောင်းလိုက်တာ စည်းနေတာဘဲ လိုးလို.မဝနိုင်ဘူး ” ဟုပြောလိုက်ရာ မေဧကရီ လည်း အောင်အောင်. လီးကြီး မဆန်.မပြဲအလိုးခံနေရတာမို. အံ.ကြိတ်ခံနေရင်းမှ “ဟွင်း ဒီဖင်ကြီး စာ ဘဲ အရသာခံကြည်. ပြီးလိုးနော် နောက်မှ မမ ကိုမထားခဲ.နဲ. အောင်. ကို သားလေးမွေးပေးအုံး မှာ အင်. အင်. အဟင်. အီး အာ. အာ. အို. ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ် အင်. ဟင်. ဆောင်. ဆောင်. အို အောင်ရယ် မမ ပြီးတော.မယ် အာ. ဟာ. ဟင်. ဟင်. အင်. လိုးပါ အောင်ရယ် မရပ်နဲ. အိ. အိ. အာ. ဟာ. အဟင်. အင်. ” နှင်. ပြီးကာနီးပြီမို. ဖင်ကြီးကို ခါရမ်းကာ ပစ်ကော. ပေးနေမိပါတော.သည်၊ ၇ အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ၏ အပေးကောင်းလွန်းကာ စောက်ပတ်မှာ လည်း စည်း ကာ သိပ်မကျယ်သေးတာမို. လိုးကောင်း ကောင်းနှင်. အချက်၅၀ ခန်. မနားတမ်း ဆောင်. လိုး ရင်း။
သုတ်ရည်များ မေဧကရီ၏ စောက်ပတ်ထဲ ပန်းထဲ.ကာ ပြီးသွားပြီး မေဧကရီ လည်းအတူ ပြီး သွားတာမို. မချွတ်သေးဘဲ စွတ်ရက် ထပ်အိပ်နေကြပြီး စောက်ပတ် ရှုံပွရှုံပွလုပ်ကာ သုတ် ရည် များညှစ်ယူနေရင်းက “ ဒါပဲနော် အောင် မမ ကိုပစ်မသွားရဘူး အောင်. အလိုကျ မမအကုန် လုပ် ပေးမယ် မမ ကိုဘဲလိုးပေးရမယ် ကေကေတို. အိမွန်တို.ကို သိပ်မရောရဘူး မမ ယောင်္ကျား ကို တောင် လီးစုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး အောင်.ကို ချစ်လွန်းလို. လီးစုပ်ပေးတာ သိလား ချစ်လင် လေး” ဟုပြောကာ မေဧကရီ မှာ အောင်အောင်. လီးကြီးကို စွဲသွားကာ အရှက်မရှိ ညုရင်းအောက် မှ ဖင်ကြီး ပစ် ကော. ပေးလိုက် ပါသည်၊ အောင်အောင် ကတော. ကျေနပ်နေကာ ဒီစော်ကြီးအား အသာချုကာ လိုးရင်း အလစ် ပေးလျှင် ညိုချောလေး ကေကေ. ကိုပါ လိုးရန်ကြံစည် နေတာ ဖြစ် သည်၊ သည်လိုနှင်. အောင်အောင် မှာ လီးပြန်တောင်လာတာမို. လက်နှစ်ဖက်ကို ရှိုကာ မေဧကရီ ၏ နို.အစုံကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းနယ်ပေးရင်း။
“ မမ ဖင်ကြီး နဲနဲကောက်ပေး အင်း ဟုတ်ပြီ ” ဆိုကာ မေဧကရီ အား ဆောင်.လိုးပါတော.သည်၊ “ ဗျွပ်ဗျွပ် ဇွိဇွိ ဘွပ်ဗျွိဗျွိ ဈွိဈွိ အီး အား အာ. အို. အောင်ရယ် စောက်ပတ်တခုလုံးပြည်.ကျပ် နေတာဘဲကွယ် အင်. အဟင်. အိ. အိ. အာ. ကောင်း လိုက်တာ ဆောင်. ဆောင်. လင်လေးရယ် အီး အား အား အမေ. ကျွတ်ကျတွ်အဟင.် အင.် အ ို အောင်ရယ် ” နှင်. မေဧကရီ မှာ အောက်မှ ဖင်ကြီး ကောက်ကာ ကော.ပေးနေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် လည်း ဆောင်.လိုးနေရင်းမှ မေဧကရီ၏ လည်ဂုတ်ကို တအား စုပ်နမ်း ပေးလိုက်ရာ မေဧကရီ၏ လည်တိုင်မှာ အနီကွတ်ပင်ထင်သွားကာ မေဧကရီ အဖို. ကာမသုခ ပြည်.ဝနေတာမို. မျက်တောင်မှေးစင်း အလိုးခံနေရင်း “ ဘွပ်ဘွပ် စွပ်စွပ် ဗျွပ်ဗျွိ အီး အား ဟာ. အင်. ဟင်. အို အောင်ရယ် ခံလို.ကောင်းလိုက်တာ အိ. အိ. အာ. ဆောင်. ဆောင်. အောင်. လီးကြီး ကို စုပ်ချင်လိုက်တာ အင်. အင်. အွင်. ဟွင်. အို. အောင်ရယ် အရမ်းကောင်းတာဘဲ။
ကိုဇော်ထွန်း လီး ထက်ကောင်းတယ် သိလား သူ က ခဏလေးဘဲလိုးနိုင်တာ အင်. အင်. ဟင်. ” နှင်. လီး ချင်း နှိုင်းယှဉ်ကာ အောင်အောင်. လီးကြီးကို တပ်မက်စွာ အလိုးခံနေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် ကတော. မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင်.လိုး နေရင်း “ မမ ဖင်ကြီး ကလည်း လိုးလို. သိပ်ကောင်းတာဘဲ အိစက်နေတာဘဲ အောင် လိုးလွန်းလို. မမ ဖင်ကြီးပြုတ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟင်” ဟုမေးလိုက်ရာ မေဧကရီ မှာ အောင်အောင်. လီးကြီး ကို စွဲနေတာမို. ဖင်ကြီး ကောက်ကာကော.ပေးနေရင်းက “ အင်. အင်. ဟင်. အို. အမေ. အီးအား အို အောင်ရယ် မမ ဖင်ကြီးကို အောင် အမြဲသာလိုးပေး ဖင်ကြီးပြုတ်အောင်လိုး ကျေနပ်တယ် သိလား အိ. အိ. အာ. အင်. ဟင်. ဟင်. မမ တကိုယ်လုံး အောင်. ကိုပေးထားပြီးသားဘဲ ဟွင်. ” ဟုပြန်ပြောလိုက် ပါသည်၊ အောင်အောင် လည်း ကျေနပ်နေကာ “ ဒါဆို မမ ဖင်ကို ချချင်တယ် ဖင်အလိုးခံမှာလား ဟင် မမ ” ဟုမေးလိုက်ရင်း။
မေဧကရီ ၏ ဖင်ကြီးပြားကပ်သွားအောင် အဆုံးဖိလိုးလိုက် လီးကြီး တချောင်းလုံး ကျွတ်ခါနီး အထိဆွဲထုတ်ကာ ဖင်ကြီးကော.ကာ ကြွတက်လာမှ ပြန်ဆောင်.လိုး လိုက်နှင်. မှန်မှန်ကြီး ဆောင်.လိုးပေးနေတာမို. မေဧကရီ မှာ မျက်နှာရှုံမဲ.ကာ အံ.ကြိတ် အလိုးခံ နေရပါတော.သည်၊ “ ဗျပွ်ဗျပွ်ဘွပ်ဈိစွ ျ ွိ ဗျွိဗျ ွိ အီးအား အင.် အင.် အ ို အောင်ရယ်ကောင်းလိုက် တာ မောင်းထောင်းနေသလိုဘဲ အဟင်. အင်. အိ. အိ. အာ. ကျွတ်ကျွတ် အောင်. သဘောရှိပါ ကွယ် ဖင်ချချင်လည်းချလေ အီး အား ” နှင်. မေဧကရီ ကတော. အောင်အောင်. လီးကြီးကို ခိုက် နေတာမို. ဖင်ခံဖို.ပင် မငြင်းတော.ပေ၊ အောင်အောင် က “ ဒါကြောင်. မမ ကချစ်လို.လိုးလို.ကောင်းတာ နောက်နေ.ကျမှ မမ ဖင်ကိုပတ်ကင်ဖွင်.မယ် အခုတော. စောက်ပတ်ကြီးကို လိုးလို.မဝနိုင်သေးဘူး ” ဟုပြောရင်း မီး ကုန်ယမ်းကုန် ဆောင်.လိုးနေတာမို. မေဧကရီ မှာ ကာမသုခပြည်.ဝနေကာ “ အိ. အိ. အာ. ဟာ. အို. အောင်ရယ် တညလုံး မအိပ်ဘဲ လိုးပေးနော်။
အီး အား အင်. အင်. အဟင်. ” နှင်. အလိုးခံနေ ရင်းမှပင် အလိုရမက်ကြီးကာ ဏှာထန်နေပါတော.သည်၊ အောင်အောင် လည်း ပိုက်ဆံရှိပြီး ဒီလို ဏှာကြီး သည်. စော်ကြီးကို ကောင်းကောင်းလိုးပေးပြီး ချုစားရန် အကြံရှိပြီးသားမို. အကြိုက်ပင် ဖြစ်ကာ “ စိတ်ချ ဒီတညလုံး မမ ကိုလိုးမှာ မပူနဲ. ” ဟုပြောရင်း လီးကြီး ကိုမွှေ.ရမ်းကာလိုးပေး လိုက်ရာ “ အာ. ဟာ. အို. အောင်ရယ် ဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တာလဲကွယ် အင်. အဟင်. ဟင်. အီး အား အို ကောင်းလိုက်တာ ဆောင်. ဆောင်. မမ ပြီးချင်နေပြီ အိ. အိ. အာ. ဟာ. ” နှင်. မေဧကရီ မှာ အထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါတော.သည်၊ သည်လိုနှင်. အောင်အောင် လည်း မေဧကရီ စောက်ပတ်ကြီးကို အားရပါးရ တက်လိုး နေရင်း နှစ်ဦးသား ကာမသုခပန်းတိုင်ဆီသို. အပြိုင်လှမ်းကာ အချက် ၄၀ ခန်. ခပ်ကြမ်းကြမ်း မနားတမ်း ဆောင်.လိုးကာ ပြီးသွားကြတာမို. အောင်အောင် လည်း သုတ်ရည်များ မေဧကရီ၏ စောက်ပတ်ထဲ ပန်းထည်.လိုက်ပြီး မချွတ်ဘဲ ထပ်လျှက်အိပ်လိုက်ပါသည်။
မေဧကရီ ကတော. သူ.စောက်ပတ်ထဲ လီးစွပ်ထားတာမို. ပျော်နေကာ “ အောင်ရယ် အောင်.လီးကြီး မမ စောက်ပတ် ထဲ အခုလို အမြဲစွပ်ထားချင်လိုက်တာ သိလား နောက်ည လည်းအိမ်မပြန်နဲ.ကွာ နော် ဒီမှာဘဲ အိပ်ပြီး မမ ကိုလိုးပေးအုံး နော် “ ဟုပြောလိုက်တာမို. အောင်အောင် လည်း “ အင်းပါ မမ ကို ကောင်းကောင်း လိုးမှာ မပူနဲ. ” ဟုပြန်ပြောသည်၊ မေဧကရီ လည်း ကျေနပ်သွားကာ “ပူရမှာပေါ. အောင်ရဲ. မမ က အောင်.ရင်သွေးလေး လိုချင်တာကို ခလေးရအောင် လိုးပေးနော် အောင် ” ဟု ပူစာနေပါသည်၊ သူတို. နှစ်ယောက်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကာအရှက်မရှိလိုးနေ ကြကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ.နေတာမို. အိမ်ဖော်မလေး သက်စု မှာ ခိုးကြည်.နေတာ မသိကြဘဲ ဆယ်ကျော်သက် ကရင်မလေး သက်စု မှာ စောက်ပတ်တခုလုံး စိုရွှဲနေကာ အလိုးခံသည်.အရသာ ကို မည်းစမ်းချင်မိပါတော.သည်၊ ထိုညက အောင်အောင် လည်း တညလုံး မအိပ်ဘဲ မေဧကရီ အား ၅ ချီလိုးပေးလိုက်ရာ မေဧကရီ မှာ မျှော.သွားကာ လည်တိုင်တွင်လည်း အနီကွတ်ထင်နေတာ မသိလိုက်ဘဲမိုးလင်းခါ နီး ခဏသာ မှိန်းလိုက်ရပါလေတော့သည်…..ပြီးပါပြီ။
Categorized as အင်းဆက် Tagged မညှာနဲ့ဆောင့်နော်